Nwere ike ibudata ZenUI Launcher site na Playlọ Ahịa Google Play | Gam akporosis
Izu abụọ gara aga anyị nwere nnabata nke nnukwu launcher na ụdị nke 2.0, Ihe ngosi ADW. Mgbe afọ ise gasịrị, onye nrụpụta mechara weta nsụgharị a doro anya nke na-etinye anyị n'ihu ngwa ngwa nke nnukwu mma dịka ị nwere ike ịhụ ụfọdụ. Na usoro nke launchers, anyị nwere ike inwe obere mkpesa, ebe ọ bụ na anyị nwere ole na ole na-arụ nnukwu ọrụ, naanị ihe nwere ike ịhapụ anyị bụ mmetụta na anyị na-achọ ihe ọzọ.
Ugbu a bụ mgbe Asus mere onye na-ebupụta ndabara ya nke akwa ZenUI nke dịịrị mmadụ niile Gam akporo 4.3 ngwaọrụ ma ọ bụ karịa. Yabụ na anyị nwere ike ịsị na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ga-enwe ike ịnweta omume ọma na uru nke onye na-agba ọkụ nke ejiri atụmatụ abụọ dị iche iche mara. Onye na-ebido mmiri iji gbalịa ịdị iche na ndị ọzọ.
Ejiri ZenUI nwee akụkụ abụọ kewara nke ọma. Otu akụkụ na-adọta site na isi iyi nke mmụọ nsọ nke iOS na-anọchi, nke pụtara na enweghị ngwa drawer iji, dị ka LG G5 nke na-enweghịkwa ya, ọ bụ ezie na anyị nwere nhọrọ nke ịnwe ike ịnweta ụdị ọkọlọtọ na ya. Versiondị a pụrụ iche, ị ga-enwe ngwa niile na ụzọ mkpirisi haziri na nseta niile ị megoro.
Nhọrọ nke ọzọ bụ ụdị nke nọ n'ọrụ ákwà na drawer nke ngwa, dị ka ọ dị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-ebupụta mmiri anyị nwere na Storelọ Ahịa Google. Ka o sina dị, nhọrọ ahụ na-enweghị drawer ngwa na-eme ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa ngwa ngwa pụrụ iche n'oge ahụ.
Ihe omuma ya bu ihe di iche iche na-emesi ike na ihe oyiyi na akwụkwọ ahụaja nke ngwaọrụ ahụ. I nwekwara ike ịdabere na swipes ịrụ ngwa ngwa omume na ihe bụ nhọrọ igbochi ngwa ọdịnala na-enye gị ohere zoo ndị ị chọrọ ka ha wee nwee nchebe site na ndị na-ahụ ihe. Ihe nnabata ahụ dị site na Storelọ Ahịa Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Asus ZenUI launcher nwere ike ugbu a arụnyere na ihe ọ bụla gam akporo 4.3 ma ọ bụ ngwaọrụ dị elu
N’OGE dị anya gara aga, enwere ike itinye ihe nkwụnye ZenUI na ngwaọrụ gam akporo ọ bụla. Daalụ
Ọfọn, ọ bụghị oge ma ọ bụ ihe ọ bụla na ụlọ ahịa egwu ...
Zaghachi na Noum
Lelee ha posts biko, ZenUI launcher dị maka ihe ọ bụla android ngwaọrụ kemgbe afọ gara aga.
Edepụtaghị ozi ahụ site na ebe ọzọ wee chọpụta ihe ọmụma ahụ na mbụ.
Zaghachi to bostero
Esi esi wepu mmemme beta nke ngwa na Google Play Store